Archive du 18-mai-2022
Be loatra ny adalana Fanjakana efa tsy to-teny intsony
Isan’ny Fanjakana ratsy endrika indrindra tamin’ireo nifanesy nitondra an’i Madagasikara ity Fanjakana Rajoelina ity. Malaza ratsy niainga tany amin’ny tetezamita, nosokajian’ny vahiny ho tsy misy kalitao, ka tsy voaarina sy toa mbola mitohy hatramin’izao izany.
Toy ny jerem-potsiny
Samy tompon’andraikitra mahazo ny firenena hatramin’izay ka hatramin’izao isika rehetra izay manana kara-panondrom-pirenena malagasy na monina eto amin’ity Madagasikara ity io na any ivelany any.
MONDIAL 2022 ANY QATAR “TSY 28 ANDRO NO HANOVANAY NY FOMBANAY”
Hentitra ny fitondrana Qatari mikasika ny tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja baolina kitra na « Mondial 2022 » atao any Qatar.
Afera maizina Misy mividy 5 000 dolara ny voa-maso iray
Raha araka ny fanadihadiana natao dia misy maka sy mividy ireny maso hangalarin’ireo dahalo sy ireny mpamono olona ireny ankoatra ny hampiasain’ireo ombiasy azy hanomezany hery ny ody gasy hampiasainy.
Nosamborina i Vaonalaroy Randrianarisoa Nisoloky, nisandoka ho mpiasan’ny Prezidansa…
Nosamborina ny maraina teo ary nentina tao amin’ny Sampam-pikarohana momba ny heloka bevava eny Fiadanana
Women in Business Tokony hiroso hatrany ny vehivavy mpandraharaha
Manana ny maha-izy azy ny vehivavy mpandraharaha. Tokony ho faka tahaka izy ireny hoy ny Minisitra Edgard Razafindravahy omaly talata 17 mMey tetsy amin’ny hotel Carlton Anosy.
Lehilahy matin’ny fitsaram-bahoaka “Tsy nanan-tsafidy izahay”, hoy ny zandary
Tovolahy iray antsoina hoe Andry no namoy ny ainy vokatry ny ratra sy vono an-tsitra-po nahazo azy izay nataon'ny vahoaka maro tao amin'ny Distrikan'i Betafo.
La grande braderie de Madagascar Hanampiana ny mpandraharaha, tohana ho an’ny mpanjifa
Efa ao anatin’ny fanomanana ilay hetsika ara-toekarena goavambe hotontosaina etsy amin’ny kianjan’i Barea Mahamasina hatramin’ny omaly ny Madavison, mpikarakara ilay hetsika La grande braderie de Madagascar.
Vola CNaPS, karama, fitantanana… Miantso vonjy ny mpiasan’ny INSTAT
Nanao fanambarana tetsy amin’ny INSTAT Anosy omaly ireo mpiasa eo anivon’ny INSTAT izay mandray zo tsy miankina na “droit privé”.
Marc Ravalomanana Tadidin’ny olona tsara ny fampandrosoana nentiny
Na dia efa 13 taona lasa izay no nialany teo amin’ny fitondrana dia mbola tadidin’ny olona hatrany ny fampandrosoana nentin’i Marc Ravalomanana teto amin’ity firenena ity.
Gérard Ramamimampionona “Mila sorohana ny savorovoro”
Rehefa akaiky, anatiny, aorian’ny fifidianana dia misavorovoro foana ny firenentsika, hoy ny filoha lefitry ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (CFM), Gérard Ramamimampionona.
Garazy 67 ha Atsimo Tratran’ny Service Anti-Gang ilay mpanendaka
Nitangorona tampoka ny olona teny amin’ilay “4 chemins” akaikin’ny Garazy 67 ha Atsimo omaly, anton’izany ny zava-nitranga tsy lavitra teo .
Fanadihadian'ny depiote ny trafikam-bolamena Mba ho lasa lavitra sa ho resabe fotsiny indray ?
Nankatoavin'ireo solombavambahoaka omaly 17 may 2022 ny fandaharam-potoana ny 12 mey hatramin'ny 01 jona 2022 ho avy izao.
Fiahiana ny ankizy sy ny sembana Nifampidinika ireo masoivoho sy ny minisitry ny mponina
Miroso hatrany amin’ny fanatsarana ny fiahiana ara-tsosialin’ireo ankizy sy olona manana fahasembanana ny Ministeran’ny Mponina.
Fambolena sy fiompiana an-dranomasina Vatsian’ny Amerikanina 6,3 tapitrisa dolara ny “Nosy Manga”
Nankalaza fiaraha-miasa vaovao miaraka amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina mba hampiroboroboana ny fiompiana ahidrano sy dingadingana maharitra ny vahoaka Amerikanina amin’ny alalan’ny Sampandraharaha
67 ha Misy maka ireo vatokely hanamboaran-dalana
Mihisatra tanteraka ny asa fanamboaran-dalana etsy amin’ny 67 ha, avy any amin’ny lalam-baovao mivoaka etsy Ambodin’Isotry.
Resaka ka atao fa raha hoe fitoniana izay aloha dia tena mbola lavitry ny afo ny kitay.Sarontsaronana ny zava-drehetra, tsy misy ny fiampiresahana an-kitsim-po ka mirangaranga eny foana ny kibay.
Rotorotom-piainana sy adin-tsaina Miha maro, miha tanora ny Malagasy miakatra tosi-dra
Mitombo isa hatrany ireo Malagasy sahirana eto amintsika. Ankoatra ny fitadiavana ny hanin-ko hanina isan’andro dia anisan’ny tena mavesatra ny fitsaboan-tena raha tojo tsy fahasalamana.
TENY GASY Fanagasiana = fahalalana ny Tantara sy Jeografian’i Madagasikara
Isan’ny fitakiana goavana, tamin’ny «13 mey 1972», ny»Fanagasiana». Bokin’ny fandaharam-pianarana frantsay, «Histoire et Géographie», kilasy «CE2», izany hoe «Neuvième» taloha» na ihany koa T3, no eto ambany masoko.